Filtrer les éléments par date : jeudi, 22 novembre 2018
jeudi, 22 novembre 2018 19:41
Jean Ravelonarivo: Miantso ny rehetra hanaiky ny voka-pifidianana avoakan'ny HCC
Naneho ny heviny mikasika ny fifidianana filoham-pirenena tamin'ny 7 novambra 2018, ny kandida Jean Ravelonarivo. Nisy ny tsy fahatomombanana tamin'ny fikarakarana sy fikirakirana ny voka-pifidianana, na izany aza tsy nametraka fitoriana ny tenany. Apetraka amin'ny Fitsarana avo momba ny Lalampanorenana (HCC) ny andraikitra hoy izy.
Miantso ny rehetra ho tony sy hanaiky izay voka-pifidianana havoakan'ny HCC eo ny tenany.
jeudi, 22 novembre 2018 15:35
Japon: Voatsoakan'i Nissan i Carlos Ghosn
Taorian'ny fivorian'ny filankevim-pitantanan'ny Nissan, dia voaroaka tsy ho Talé Jénéralin'ny Orinasa intsony i Carlos Ghosn, izay enjehan'ny fitsarana japonais ho nandositra fandoavan-ketra, sy fampiasana ny fitaovan'ny orin'asa ho tombontsoan'ny tena.
Mbola tanana 10 andro any amin'ny fonjaben'ny Tokyo izy, eo ampanaovana fanadihadihana azy sy anolorana azy ny fitsarana.
Figadrana 10 taona no mety hiandry ity Tale nanavotra ny orinasa fanamboarana fiarakodia ity.
Japon: Nitarina 10 andro ny fihazonana an'i Carlos Ghosn DG Renault - Nissan - Mitsubishi
Vao nidina ny fiaramanidina nitondra azy tao Japon ity Tale jeneralin'ny Ozinina mpanamboatra fiarakodia ity, no notsenain'i polisy japonais.
Avy hatrany dia notazonina hanaovana fanadihadiana momba ny tsy fandoavana hetra tamin'ny 37 millions d'euro karamany. Misy ihany koa ahiahy amin'ny fanararaotana ny volan'ny orin'asa tamin'ny fividianana trano tany France, Pays-Bas, Rio de Janeiro Brésil, Beyrouth Liban nefa tsy ampiasain'ny orin'asa fa ampiasainy manokana.
Mivory ny orinasa Nissan handray fanapahan-kevitra momba ity Tale jenaraly izay nanavotra ny orinasa ity nandritra ireny rivo-doza ara-bola nahazo ny mpanamboatra fiarakodia ireny.
Photo: Carlos Ghosn est détenu à la prison de Katsushika, au nord de Tokyo. (KANAME YONEYAMA / YOMIURI / AFP)
jeudi, 22 novembre 2018 14:28
Didier Drogba: Nijanona tsy hilalao intsony
Feno 40 taona ity Ivorianina mpilalao baolina ity no izao nanapa-kevitra ny hijanna tsy hilalao baolina matihanina intsony.
jeudi, 22 novembre 2018 12:07
Ambohidahy: Confrontation des PV assistée par l'UE
La Mission d'observation électorale de l'UE à Madagascar 2018 suit la confrontation des procès-verbaux au siège de la Haute Cour Constitutionnelle à Antananarivo.
jeudi, 22 novembre 2018 11:45
Aiza avy ireo faritra betsaka olona tsy nifidy?
Vaky sasaka ny Malagasy tonga nifidy sy ny tsy nandeha nifidy. 5 000 000 latsaka ny tsy nifidy.
Mila fantarina izany ny anton'izay tsy nandehanan'ny olona nifidy izay.
Ireo tsy ao anaty lisitry ny mpifidy dia vitsy lavitra noho ireo efa voasoratra fa tsy tonga nifidy.
Ilaina izany ny mahita ireo faritra betsaka tsy nifidy. Miloko marron matroka ny faritra nisy isan'ny olona betsaka indrindra tsy tonga nifidy amin'ny carte, Analamanga, efa 800 000 mahery, mandeha any amin'ny loko mihamazava ny vitsy tsy tonga nifidy, Melaka, Betsiboka, Bongolava, Ihorombe.
jeudi, 22 novembre 2018 11:18
Belo Tsiribihina: Nisy nanodinkodina ny tambinkaraman'ireo Sefo Fokontany tamin'ny fifidianana ?
Velon-taraina ireo Sefo Fokontany fa hatramin'izao tsy misitraka ny tambinkarama voafaritry ny lalàna homena azy ireo tamin'ny fanatontosana ny fifidianana filoham-pirenena notanterahina ny 7 novambra 2018.
Nandefa taratasy any amin'ny minisitry ny Atitany izy ireo ho fampahafantarana izany, sy mitaky ny hanomezana azy ireo ny valin-kasasarany.
jeudi, 22 novembre 2018 10:59
Inona izany logiciel ?
Misy asa tsy miova ary miverimberina ny fikajiana azy.
Dia iny no ilana informatique, anafaingana sy anamorana ny asa atao miverimberina.
Ny programa na ny fizotran'izay asa sy kajy izay zany no antsoina hoe programme na logiciel.
Io logiciel io zany dia tsy afaka ovain'ny mpampiasa azy fa izay nataon'ilay mpanamboatra azy, na ilay programmeur ihany no ao.